महावीर पुन भन्छन् : १३ बर्ष स्थायी शिक्षक भए पछि म बहुलाएँ ! | EduKhabar
महावीर पुन भन्छन् : १३ बर्ष स्थायी शिक्षक भए पछि म बहुलाएँ !
म एउटा अनौपचारिक मान्छे । अनौपचारिक कुन मानेमा भने मेरो कुनै जागिर छैन । कुनै ब्यवसाय छैन । मेरा जति पनि कामहरु भईराखेका छन् अनौपचारिक रुपमा भईराखेको हुनाले म एउटा अनौपचारिक मान्छे हुँ ।
म अहिले सम्म पनि आफूलाई शिक्षक भन्छु । हुन त तपाईहरुले सुन्नु भएको छ होला महावीर पुन भनेको एउटा विज्ञ हो, अथवा आविष्कार गर्ने बैज्ञानिक हो अथवा के हो भन्ने सुन्नु भएको होला, मान्छेले हावामा भन्दै हिँडेका छन् । म केही पनि हैन । म आफूलाई विज्ञको रुपमा कहिले पनि राख्न चाहन्न । म एउटा शिक्षक मात्रै हुँ । १३ बर्ष सम्म मैले स्थायी शिक्षकको रुपमा काम गरेको हो । २०३६ सालको आन्दोलन हुँदा म चितवनमा शिक्षक थिएँ, शिक्षक साथीहरु आन्दोलनमा उत्रिनु भयो । म पनि संग सँगै मैदानमा उत्रिएको हो । शिक्षक संगठनको शुरुको दिन देखि २०४४ साल सम्म चितवनमा बनेको शिक्षक संगठनको तदर्थ समितिमा पनि मैले काम गरेको हुँ ।
१३ बर्ष सम्म स्थायी शिक्षक भएर काम गरेपछि मेरो दिमाग विग्र्यो, म बहुलाएँ !
म बहुलाएर अमेरिका गएँ । अहिले पनि उतिबेलाका साथीहरु भेट्यो भने हाँस्छन् । अमेरिका गएँ, के के पढेर आएँ, अमेरिकामा पढेको उतै छाडेर आएको हो ।
नेपालमा आएर काम गरेको पनि अहिले २५ बर्ष भयो । २५ बर्ष देखि मैले अनौपचारिक रुपमा सेवाको रुपमा काम गरेँ । यसरी काम गर्दा पनि शिक्षालाई नै केन्द्रविन्दु बनाएर काम गरेको हो । मैले म्याग्दी जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षाको गुणस्तर उकास्नको लागि र त्यहाँको आर्थिक समस्याहरु केही समाधान हुन्छ की भनेर विभिन्न आय श्रोतका कार्यक्रमहरु, पर्यटनका कार्यक्रमहरु, आय आर्जनका कार्यक्रमहरु शुरु गरेको हो । जुन अझै पनि चलिराखेको छ ।
भर्खर भर्खर ईण्टरनेटको जमाना आउँदै थियो, यसलाई विद्यालयहरुमा लैजान सकियो भने, पठनपाठनमा र विद्यार्थीले पाउने शिक्षाको गुणस्तरमा पक्कै पनि सहयोग हुन्छ भन्ने लाग्यो । किन भने मैले अमेरिकामा सिकेर आएको कुरा मैले लागू गर्न चाहन्थेँ । गरेको त्यही हो, जानेको जति जे जे गरियो त्यही हो ।
२५ बर्ष मैले कुनै जागिर खाएको हैन, समाज सेवाको रुपमा काम गरे पछि मलाई एउटा ज्ञान प्राप्त भयो । त्यसरी समाज सेवा गरेर देशको विकास गर्छु भनेर कोही लागेको छ भने देशको विकास हुँदो रहेनछ । समाज सेवा र देशको विकास भन्ने कुरा एकदमै भिन्न कुराहरु हुन् भन्ने सिक्न मलाई २५ बर्ष लाग्यो ।
त्यसैले मैले अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको अभियान चालेको छु ।
देशको विकास देशलाई समृद्धि बनाउने भन्ने कुरा हरेक नेपालीको चाहना छ । यसका लागि हरेक दल, तीनका नेता र सारा नेपाली लागेका छन् । सके सम्म छिटो समृद्धि होस् भन्ने सबैको ाहना छ सपना छ । तर, समृद्धि बनाउ भनेर उफ्रेर मात्रै समृद्धि आउँदैन । समृद्धि बनाउनका लागि काम गर्नु पर्छ ।
कुनै पनि देशलाई समृद्ध बनाउन के के चाहिन्छ भनेर लिष्ट बनाउने हो भने निकै लामो लिष्ट बन्छ । नेपालमा त्यो लामो लिष्टमा एउटा कुरा छुटेको छ । त्यो लिष्टमा जब सम्म देशको प्रतिभालाई शिर्ष स्थानमा राखिदैंन देश समृद्ध हुँदैन । संसारका जतिपनि विकसित देश छन् तिनले आफ्नो देशको प्रतिभालाई शिर्ष स्थानमा राखेकै कारण अहिले यो स्थानमा आएका हुन् । तर, हामीले त्यो शिर्ष स्थानमा राख्नु पर्ने कुरालाई हामीले एकदमै तल्लो स्थानमा राखेका छौं । जब सम्म हामी नेपालीले यो कुरालाई शिर्ष स्थानमा राख्दैनौ राख्ने शाहस गर्दैनौं तब सम्म नेपाल कहिले पनि समृद्ध हुँदैन, यो कुरा ग्यारेण्टि दिन्छु म ।
देशको प्रतिभाशाली सन्ततीहरुलाई देशमा राख्नु पर्छ । जुन कुरा नेपालमा भएकै छैन । अमेरिका जापान बेलायत जति पनि विकसित देश भन्छौ उनीहरुले प्रतिभालाई देशमा राखेर उनीहरुको प्रतिभालाई प्रयोग गरेर त्यो प्रतिभाबाट देशको आर्थिक विकास गरेको हो ।
१९६० को दशकमा हामी जस्तै थियो । तर अहिले उनीहरु कहाँ छन् हामी कहाँ छन् ? उनीहरुले के गरे र त्यहाँ पुगे हामीले के गरेनौं र पिँधमा छौं ? उनीहरुले केही गरेकै हैन । उनीहरुले आफ्नो देशको प्रतिभालाई आफ्नै देशमा काम गर्ने वातावरण मिलाए । प्रतिभालाई फकाएर फुलाएर के गरेर हुन्छ देशमै राखेर देशको आर्थिक विकास गरेको हो उनीहरुले । र, त्यो गर्ने काम चाँही सरकारको हो । तर, २००७ साल देखि ०७४ साल सम्म नेपालमा जति सकेर बने यो कुरालाई पटक्कै प्राथमिकता दिएन । त्यसैले नेपाल गरीब भएके हो, त्यसैले यो कुरालाई जनस्तरबाटै सबै मिलेर सरकारलाई मद्धत गरौं ।
देशमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्ता अनुसन्धान केन्द्रहरु स्थापना गरौं र एउटा जग बसालौं, यो बन्ने वित्तिकै सबै कुरा एकै पटक हुने कुरा हैन, एउटा जग बसालौं र त्यो जग माथि काम गरौं । अनी देश समृद्धिको सहि बाटो लाग्छ । यो बाटोबाट देशलाई समृद्ध बनाउन ३० – ३५ बर्ष भन्दा बढि लाग्दै लाग्दैन ।
यो गर्न कुनै गाह्रो काम नै छैन । कुनै पनि प्रतिभालाई के चाहिन्छ त्यो पुर्याईदिने मात्र हो । तपाईहरुका छोराछोरी छन् होला, तीनीहरुलाई कसरीपाल्नु भा छ ? त्सरी नै पाल्ने हो प्रतिभालाई । उनीहरुलाई पैसा चाहिने भए पैसा दिने हो, खाना भोकै भयो भने खाना खुवाउने हो । उनीहरुलाई पढ्न के चाहिन्छ त्यही वातावरण उपलब्ध गराउने हो ।
प्रतिभालाई संरक्षण गर्न चार कुरा आवश्यक छन् ।
– आर्थिक सहयोग
अनुसान्धानमा कति आर्थिक श्रोत लाग्छ भन्ने यकिन हुँदैन, धेरै पनि लाग्न सक्छ । थोरै पनि लाग्न सक्छ । अनी उनीहरुलाई विशेषज्ञसँग भेटाईदिने र सुपर भाईजर खटाईदिन सहयोग गर्ने ।
– सफल अनुसन्धानलाई थप खारेर प्रोडक्ट वा सर्भिस निर्माणमा सघाउने
– अनुसन्धानको ट्रेड मार्क संरक्षण गर्न सघाउने
– लगानी कर्ताहरुसँग भेटाईदिने र त्यो अनुसन्धानलाई ब्यापारीकरण गरिदिने ।
देशको बढ्दो ब्यापार घाटा डरलाग्दो छ । ९० प्रतिशत बस्तु हामी आयात गछौं सात आठ प्रतिशत मात्रै निर्यात् गर्छौ । यस्तो किसिमको ब्यापार घाटा घटाउने भनेकै देशको प्रतिभालाई देशमै राखेर उनीहरुबाट अनुसन्धान तथा विकास गरेर उनीहरुको आईडियालाई बजारीकरण गर्नु पर्छ । अरु सबै विदेशी देशहरुले गरेको त्यही हो । हामी यहि कुराहरुको लागि यो अभियानमा जुटेका छौं । तपाईहरु पनि शिक्षक हुनुहुन्छ तपाईहरुले आफ्नो क्षेत्र वा विद्यालयमा यस्ता प्रतिभा भएका विद्यार्थी देख्नु भएको छ भने पहिले देखिनै उनीहरुलाई त्यही अनुसार पालन पोषण गरिदिने, हुर्काउने त्यही अनुसारको वातावरण निर्माण गरी दिनुहोस् ।
त्यसको लागि कुनै पनि सहयोग चाहिन्छ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सम्झिनुहोस् ।
केन्द्रका लागि सहयोग चाहन्छि । यसको लागि सम्पूर्ण नेपालीको सहयोग चाहिन्छ । यसलाई महादान कार्यक्रम भनिएको छ । यो कुनै पैसा उठाउने मात्रै कार्यक्रम हैन । तपाई तीन किसिमले दान गर्न सक्नु हुन्छ । देश विदेशमा रहेका जो सुकैले दिन सक्ने पहिलो दान बुद्धि वा सीपको दान हो । तपाईसँग सीप बुद्धि छ भने दान दिनुहोस् किन भने बुद्धि नभईकन कुनै काम हुँदैन । यस्ता आविष्कार केन्द्र देशै भरी खोलौं ।
दोश्रो दान एक पटकको लागि तपाईको क्षमताले भ्याए सम्म आर्थिक दान गर्नुहोस् । कतिपय विद्यार्थीले खाजा खाने पैसा उवारेर हामीलाइ दान गरका छन् । यो एक पटकको लागि हो हामी दुई पटक दान माग्दै माग्दैनौं । किन भने सँधै दान मागेर चल्दैन । एकपटक आएको दानलाई लगानी गरेर त्यहीबाट केन्द्रलाई दिगो बनाउँछौं । अन्तिमको दान भनेको समयको दान गर्नुहोस् । हप्तामा ३० ४० मिनेट जति सक्नुहुन्छ समयको दान गर्नुहोस्, यसलाई सबै नेपालीको ढोका ढोका सम्म पुर्याउनुहोस् । एक प्रतिशत नेपालीले मात्रै हाम्रो काम बुझिदिए पनि हुन्छ । तीन करोड नेपालीको एक प्रतिशत भनेको तीन लाख हो, यत्तिले मात्रै बुझिदिए पनि हुन्छ । तीन लाख नेपाली मध्ये हरेकले एक दुई हजार मात्रै दियो भने पनि यो अभियानलाई सफल बनाउन पुग्छ ।
अहिले सम्म साधारण नेपालीबाट गरेर केन्द्रमा ६ करोड जति उठेको छ । मेरो नाममा भएके जग्गा र मैले अहिले सम्म पाएका राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय पदकहरु बेचबाच गरेर १० करोड रुपैंया सम्म यो कोषमा जम्मा भएको छ । त्यसबाट अहिले सानातिना काम भईरहेको छ । छ सात समूहका भाई बहिनीहरु अहिले काममा जुटिरहेका छन् ।
तपाईहरुलाई कँही कतै मेरो समय आवश्यक ठान्नु भयो भने मलाई फोन गर्नुहोस् म उपलब्ध हुने छु ।
शुक्रबार शुरु नेपाल शिक्षक महासँघको प्रथम राष्ट्रिय महाधिबेशनमा पुनद्धारा व्यक्त धारणाको मुख्य अँश । प्रविधि मार्फत् सिकाइमा सकृय पुनले म्याग्दीमा गरेको कार्यलाई अन्र्तराष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त भएको छ ।
प्रकाशित मिति २०७४ फाल्गुन २६ ,शनिबार
Omishan Thapa9 months ago
देशकालगी यिनीजस्ता बहुलाहरु धेरै जन्मिएदेखी ....
ramesh pun9 months ago
हजुर धन्यवाद दाजु हजुरको बिचार अत्यन्त मार्मिक अनि बिचार निय छ।हजुर जस्तो मान्छे यो देश लाई अति चाही आबसम्यक छ हजुर को बिचार अत्यन्त महान छ आर्थिक रुपमा सहयोग सल्लाह दिन नसकेता पनि अन्तर आत्म देखी सलाम गर्छु। यो देश का चोर नेताहरूको खै बुद्धि नआउला त्यो कुर्सीमा लडाइँ के गर्नु बास बिदेश को मुख ताक्नु सिबाय अरु छैन। ।।।।।
krishna katwal9 months ago
Mahabir sirko kura sunera ekdam ramroo lagyoo khusii panii lagyoo bt hamii yuwa haru pani kai grna chahanxau business .wa aru kai ab hamro deshma udyog revolution grnu paryoo